कोरोनाभाइरसबाट कसरी जोगाउने? | RayHaber | raillynews
घरसाधारणकोरोनाभाइरसबाट कसरी जोगाउने?
कोरोनाभाइरसबाट कसरी जोगाउने
त्यहाँ कुनै औषधि छन् कि आज कोरोनाभाइरस को लागी प्रभावकारी देखाइएको छ। यस कारणले गर्दा, बिरामीहरुलाई उनीहरूको गुनासोहरु लाई कम गर्न र बिरामी अंग कार्यहरु लाई समर्थन गर्न को लागी, यदि कुनै छ भने। हाम्रो देशको गत १ days दिनमा चीनमा व्यक्तिगत यात्रा गरेका वा भ्रमण गरेका व्यक्तिहरूले पनी निश्चित रूपमा नजिकको स्वास्थ्य सेवामा सम्पर्क गर्नुपर्‍यो यदि उनीहरूमा ज्वरो, खोकी र श्वासप्रश्वास जस्ता लक्षणहरू छन् भने।
भाइरसलाई बचाउने के के तरिकाहरू छन्?
कोरोनाभाइरस कोरोनाभाइरस पत्ता लागेको बिरामीहरुलाई सार्न सकिन्छ जब हामी एक मिटर भन्दा बढी पुग्छौं। बिरामी व्यक्तिहरूलाई सकेसम्म सम्पर्क गर्नु हुँदैन। यसलाई रोकथाम गर्न, बिरामी व्यक्तिहरू सकेसम्म समुदायमा बाहिर जानु हुँदैन, तर यदि उनीहरूले मास्क लगाउनु पर्छ भने।
धेरै ह्यान्डशेक र हगलाई बेवास्ता गर्नुपर्छ।
बाह्य कारकहरूबाट रोकथाम विधि
जब हामी खोक्दछौं वा छींकन्छौं, यदि हामीसँग रुमाल छैन भने, हामीले हावामा छिन्डा वा खोक्नु पर्छ। यो कोरोनाभाइरसका लागि मात्र नभई अन्य चिसो र फ्लूको लागि सुरक्षाको एक विधि हो।
हात स्वच्छता धेरै महत्त्वपूर्ण छ। बाहिरबाट घर आउने बित्तिकै हामीले आफ्नो हातहरू पक्कै धुनु पर्छ। सकेसम्म धेरै साबुन र प्रशस्त पानीको साथ, यो औंलाहरू बीचमा धुनु आवश्यक छ, हातको माथिल्लो भाग, हथेली र त्यसपछि सुख्खा। यो केवल पानी भएर गइरहेको छैन।
हामीसँग हातले कीटाणुनाशकहरू हुनु आवश्यक छ जुन दिनको दिनमा बाहिर हुँदा पानीको आवश्यकता पर्दैन। यो मेट्रो, बसहरूमा यात्रा गर्दा बजारमा किनमेल गर्ने बित्तिकै हामीले आफ्नो काम सक्यौं भने कीटाणुनाशक पदार्थहरू प्रयोग गर्न उपयोगी छ।
सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा उपायहरू
यो बारम्बार हावामा हाल्नु पर्छ।
सतह सफाईमा ध्यान दिनुपर्दछ। यदि यो दिनमा २ पटक मेटियो भने यो संख्या दोब्बर बनाउनुपर्दछ। यो घर को लागी जान्छ।
ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू यी स्थानहरूमा उपलब्ध हुनुपर्दछ।
अब अस्पतालमा जानु पर्छ
फ्लू र फ्लूको लक्षणका साथै, युवाहरूलाई कुनै रोग छैन भने उनीहरूलाई सास फेर्न गाह्रो हुने बित्तिकै डाक्टरसँग सल्लाह लिनु पर्छ।
जसले क्यान्सर, किडनी रोग, मुटुको प्रत्यारोपण, र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई दबाउनेहरूले तुरून्त अस्पतालमा जानुपर्दछ, सामान्य फ्लूको लक्षणहरूको साथ पनि।
मास्कको प्रयोगमा ध्यान दिनुहोस्
उनले बताए कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिरामीहरूका लागि मास्क लगाउनु हुँदैन। यो भनिएको थियो कि मास्क लगाउनुले "सुरक्षाको गलत अर्थ" लाई निम्त्याउँदछ। जब उसले मास्क लगाउँदछ, 'ठीक छ म सुरक्षित छु' भन्ने धारणा देखा पर्दछ। जो बिरामी छन् उनीहरूलाई मास्क लगाउन सिफारिस गरिएको छ। गैर-बिरामीहरूले आवश्यक पर्ने सावधानीहरू अपनाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ जुन हामीले मास्क लगाउनु अघि नै गणना गर्छौं।
इजमिरिम कार्ड भनेको के हो, कसरी किन्नुहोस्, लोड हुँदै र प्रश्न सोध्न कसरी?
Zigana स्की केन्द्र कहाँ छ? कसरी प्राप्त गर्ने कसरी मूल्य र आवास अवसरहरू छन्?
केबल कार कसरी काम गर्दछ?
Palandökende मा Snowstorm
हिमपातले उल्दागमा स्की लिफ्टहरू रोक्यो
Uludağ स्की केन्द्रमा दुर्घटनाहरू कसरी रोक्न
मार्मारले परियोजनालाई समुद्री यातायातलाई कसरी असर गर्छ? कस्ता उपायहरू लिइन्छ?
कसरी मार्मारयोजनाले समुद्री यातायातलाई असर गर्छ
कसरी रेल पाङ्ग्राहरू बनाउने?
कसले अंकारा मेट्रो सञ्चालन गर्नेछ?
Altunizade मेट्रोबस कसरी रोक्न?
कोइरालाले भनेको मेक्सिको कसरी गर्ने?
बरुमा यातायात समस्या कसरी समाधान गर्ने?